Sababta Dib U Dhigtay Heshiiska Uu Bruno Fernandes Ugu Wareegi Lahaa Manchester United Oo La Ogaaday - Gool24.Net
Sababta Dib U Dhigtay Heshiiska Uu Bruno Fernandes Ugu Wareegi Lahaa Manchester United Oo La Ogaaday
Manchester United ayaa lala xiriirinayay Bruno Fernandes bishii ugu danbeysay laakiin soo wareegista xiddiga reer Portugal weli ma aysan dhicin.
Taas bedelkeeda Red Devils waxa ay muhiimada siisay soo xerogelinta xiddigii Swansea Daniel James iyo Aaron Wan-Bissaka oo ay kala soo wareegeen Crystal Palace, laakiin waxaa lagu waramayaa inay weli doonayaan saxiixa xiddiga Sporting Lisbon.
Waxaa intaas dheer, in Fernandes uu isna sidoo kale doonayo inuu u dhaqaaqo Old Trafford, waxaana la sheegayaa inuu kalsooni ku qabo in heshiis uu dhici doono xagaagan.
Sidaasi darteed maxaa dib u dhigaya heshiiska? Jawaabta waxaa laga helayaa sharuud qariib ah oo ku jirta qandaraaska Fernandes ee Sporting Lisbon?
Inkastoo aysan aheyn sharuud rasmi ah hadana waxay aheyd heshiis raganimo, iyadoo Fernandes la sheegay inuu heshiis la gaaray Sporting Lisbon xagaagii hore markii ay kooxda dhibaato ku jirtay.
Bedelkii uu jeexjeexi lahaa qandaraaskiisa islamarkaana uu isaga dhaqaaqi lahaa kooxda sida ay sameeyeen qaar ka mid ah asxaabtiisa hore, Fernandes ayaa la sheegay inuu ogolaaday inuu sii joogo balse hal sharuud ku xiray.
Sharuudaas waxay aheyd haddii koox kale ay ku soo dalbato 35 milyan euro in Sporting ay ku qasban tahay inay aqbasho dalabka ama inay ciyaaryahanka siiso 5 milyan euro oo magdhow ah.
Heshiiskaas waxa uu meesha ka saaray heshiiskii hore ee qandaraaskiisa ku jiray ee ahaa in qandaraaskiisa lagu burburin karo 90 milyan euro, laakiin waxay Sporting u ogolaatay inay sii heystaan Fernandes xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Laakiin maxay arintaan u hakineysaa u wareegistiisa Mancheste United?
Marka si loo eego sharuuda cusub ee uu Fernandes ku xiray Sporting waxay wadada u fureysaa Manchester United oo lacag yar kula soo wareegi karta laakiin Man United waxay arintaan u wajaheysaa si taxadar leh.
Red Devils waa ay bixi kartaa 35 milyan euro waxaana ay qasbi kartaa Sporting Lisbon laakiin waxay noqon kartaa talaabo riski ah madaama aysan weli heshiis shaqsi ah la gaarin ciyaaryahanka.
Haddii wadahadalka ciyaaryahanka uu burburo ka dib markii dalabka la sameeyay markaas Sporting waxay ku qasban tahay inay Fernandes siiso 5 milyan euro oo magdhow ah, waxayna taasi xumeyn kartaa xiriirka Sporting iyo Man United.
Sidaasi darteed Red Devisl waxay dooneysaa inay marka hore heshiis la gaarto wakiilka ciyaaryahanka Miguel Pinho ka hor inta aysan gudbinin dalabka lagu burburin karo qandaraaskiisa.